Ichilo ngoMabhida ngesimo sethuna – Bayede News
Ichilo ngoMabhida ngesimo sethuna
Igama lakhe lidume umhlaba wonke
UMnu uMoses Mabhida
Igama lakhe lidume umhlaba wonke kepha lapho elondolozwe khona kungamahlikihliki
Igama lakhe laziwa umhlaba wonke kanti imisebenzi yakhe ekukhululeni aboHlanga ituswa kuleli nasemazweni omhlaba. Lowo nguMnu uMoses ‘Madevu’ Mabhida owayengumholi womzabalazo ngaphansi kweSouth African Communist Party ( SACP) nowabe enguNobhala Jikelele phakathi kowe-1978 kuya kowe-1986.
[button color=”green” size=”big” link=”https://www.pressreader.com/south-africa/bayede/” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]QHUBEKA UFUNDE[/button]
Lesi sigomagoma somzabalazo saguqela eMaputo, eMozambique salondolozwa khona. Wabe engeyedwa ngoba eduze nje kwakhe kwabe kulele esinye okuthe emuva kwenkululeko amathambo aso abuyiselwa kuleli ayofihlwa lapho azalelwa khona eMbali ngowezi-2006.
Namuhla igama lakhe liqoshwe ezibhebheni zomlando njengoba kwethiwa ngaye inkundla enkulukazi yezemidlalo iMoses Mabhida eThekwini. Nokho wonke lo mlando ubukeka uyize leze njengoba indawo lapho elondolozwe khona kwelakubo ibanga amahloni.
Kuleli sonto Ozul’azayithole bengaqali baphinde bavakashela ithuna likaMabhida elisendaweni eyahlonzwa ngokuthi yiHeroes Acre. Ekuqaleni ngesikhathi ababheki bethuna bebuzwa bathi itshe lethuna elabe linombhalo ngomlando wale nsizwa labe lithathwe nguHulumeni. Okwavela wukuthi labe lithathwe uhlaka olungaphansi kweHhovisi likaNdunankulu neligcina amagugu elaziwa ngela-Amafa/Heritage KwaZulu-Natal.
Emveni kokumangazwa yilesi senzo Ozul’azayithole bakuqinisekisa ukuthi kwenziwa konke nje lokhu umndeni kaMabhida kawaziswanga ngalokhu nokuyinto engekho emthehweni ngokwesiko. Ngisho nangaleyo eyengamele ukususwa kokuthile endaweni lapho kulondolozwe khona umuntu lokhu akuvumelekile.
Emuva kwezinyanga leli phephandaba libuyele kule ndawo laphinde layokhuluma namalungu omndeni kaMabhida, abeqembu lakhe kanye neHhovisi likaNdunankulu.
Ilanda ngokwabehlela njengomndeni indodakazi kaMabhida osekuyiyona yodwa esisele, uNks uThuthukile Mabhida ithe indlela abathuka ngayo ngokususwa kwalelikhanda letshe lesikhumbuzo baze bavula necala emaphoyiseni. Phela babesola ukuthi kunabantu akade bezama ukucekela phansi ithuna likayise. Ithi kubathathe isikhathi ukuthola ukuthi kwenzakalani njengoba ngokwazi kwabo batshelwa ukuthi umbutho wamaKhomanisi walisusa leli litshe ngoba lingekho esimweni, bathenjiswa nokuthi bazonikwa amatshe amasha abazokhetha kuwona. Uthi kuze kube yimanje akekho obazisayo ukuthi kwenzakalani.
“Angithandi ukuvela njengomuntu othanda ukukhuluma futhi ohlezi ekhalaza kodwa kubuhlungu ukuthi sahlukumezeka ngoba ubaba wahamba wasishiya ngemuva ngoba eyosebenzela isizwe. Namanje ngisho esethule siyahlukumezeka ngenxa yokuthi kwenziwa izinto ngegama lakhe ngaphandle kokwazisa umndeni. Kuyinkinga ukuba othandiweyo wenu nimhlanganyele noHulumeni, ngoba ugcina engaseyena owenu kodwa esengokaHulumeni sekwenziwa nezinto ezibucayi njengokususwa kwetshe ngaphandle kokwazisa umndeni,” kubalisa indodakazi kaMabhida ngosizi.
Indodakazi kaMabhida iqhube yathi: “Okunye okungawuniki ukuthula umoya wami yizimemo ezakhishwa yiHhovisi likaNdunankulu nyakenye, ukuba sibe yingxenye yomcimbi wokumbulwa kwebunjwamuntu likababa ngosuku lwakhe lokuzalwa olungomhla zili-14 kuMfumfu. Lokhu kwakuzokwenzeka enkundleni yezemidlalo eThekwini, okwagcina kungasenzekanga,” kuqhuba indodakazi kaMabhida. Ithe nalapho abakaze bayithole incazelo yokuthi kwenzekani.
Okhulumela amaKhomanisi KwaZulu-Natal uNks uNomcebo Msomi uthi nabo kwabamangaza ukuthola umbiko wokususwa kwetshe likaNobhala Jikelele wabo njengoba kungaxhunyanwanga nabo ngaphambi kokwenza lokhu. Uthe indlela ababekhathazeke ngayo, baze bazenzela olwabo uphenyo, lapho bathola ukuthi lolu phiko olubhekelele ukugcinwa komlando namagugu lawasusa lamatshe ngoba esinda obekwenza ashone phansi amathuna. Uthe batshelwa ukuthi kufuneka amatshe ohlobo oluthize, futhi nabo njengenhlangano basalindile ukwaziswa ukuthi azobuyiselwa nini.
“Mayelana nokunakekelwa kwale ndawo yize nathi njengenhlangano sinesibopho sokuqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle, kodwa akuwona umsebenzi wethu njengoba kunophiko olubhekelela ukunakekelwa kwamapaki namathuna ngaphansi kukaMasipala.
Sike sazama ukuhlela umcimbi wokuyobeka izimbali ethuneni siphinde silihlanze okwaphazanyiswa wukufica le ndawo ingekho esimweni esihle ukuba singaqhuba lo mcimbi. Kusezinhlelweni zethu ukwenza lokhu, kodwa sizokwazi ukukwenza kuphela uma sekubuyiselwe amakhanda.”
Okhulumela iHhovisi likaNdunankulu uMnu uBongani Tembe ethintwa uphawule ngebunjwamuntu nathe alikapheli nokuzothi lingaphela bese livulwa ngokusemthethweni. Okhulumela uMasipala uMsunduzi uNks uThobeka Mafumbatha ecelwa ukuba aphawule ngesimo samathuna uthe: “Njengophiko sinolwazi ngesimo samathuna ngokwezokuphepha nokunakekeleka. UPhiko lwezokuvakasha lizinike isikhathi sokubala zonke izikhungo ezibalulekile ngokomlando ukuze luzanelise ngesimo esikuzo nokuyizidingo ngokokuzinakekela nokuzenza ngcono. Lo mbiko wethu kanye nezincomo zethu sesiwedlulisele eMnyangweni wesifundazwe ukunxexa uxhaso lwezimali ezisosetshenziselwa imisebenzi eqondene nengqalasizinda.
Sisalindele ukuhlangana kwezinhlelo sesibeke abaqaphi abasemasangweni amathuna ukubheka ngelokhozi ukungena nokuphuma kwabeze emathuneni. Nokho siyabuqonda ubuncane besibalo sabaqaphi nesidingo sokuthola ukwelekelelwa kulolu hlangothi. Simatasa nokucela usizo lwegxalaba kweminye iminyango kaHulumeni engase ikwazi ukusisiza,” kuphetha uMafumbatha.